Bal Is Barbar Dhig Warbixinta Jwxo-shiilo iyo Jwxo-shiilada, Waxaad Oggaan Waxa ay Yihiin – Rasaasa News
Warbixin dheer ayaa waxaa soo qoray Mr. Qaaxo isaga oo ku soo qoray bogga Ergisada ee Qorahey [Qoraxey], warbixinta ayaa waxaa ay taabanaysaa arimo door ah oo la xidhiidha dagaalo ka dhacay dhulka Somalida Ogadeeniya.
Warbixnita ayaa waxaa ay u egg tahay mid qol cidla ah lagu qoray, oo waliba uu qoray ruux aan alifbeetadu u bilownayn. Aqoontu waxaa ay had iyo jeerba ka dhex muuqataa qoraalka uu ruuxu qoro. Hadii uu qoraalku noqdo mid uu qoray ruux sidaas ah, waa ximaar dhuusay oo xigmad ma leh.
Waxaana igu kalifay in aan ka faalood warbixintan, waxaa weeye wax khalad ah oo aan arkay. Halganku waa uu socdaa waxaana wada CWXO, dhibaatooyin badana way u gaystaan ciidanka Itobiya wayna wadi halganka inta ay Itobiya xooga ku joogto dhulkeena.
Waxaanse marna suurto gal ahayn in la marin habaabiyo dadweynaha arintaas oo ay ku nacayaan halganka iyo in waliba dad khaldaya halganka oo is moodaya in ay wax wanaagsan samaynayaan ma u dulqaadan karo.
Bal dadweynow Ilaahay baan idinku dhaariyee, ila dhawra shaxdan hoose ee lagu qoray bogga Qorahey.
Dhimasho ciidamada Itobiya 800 oo as kari mudo 13 maalmood ah, bil walbana waxaa uu soo Qoraa Qaaxo in ka badan 800 oo askari in laga dilo ciidamada Itobiya, marka ma u malaynaysaan in hadii intaas oo askara laga dilayo Itobiya bil walba in ay joogi lahaayeen dhulka Somalida Ogadeeniya, jawaabtu waa maya.
Hadaba, hadii aad doonayso in aad ka bogato beenta is duqaynaysa ee boggaga beenta ee Jwxo-shiilo iyo Jwxo-shiilada, bal waxaad daalacataa, xidhiidhadan hoose, si aad u ogaato in waxa ay qoraan uu yahay wax aan sal iyo raad toona lahayn, mid walibana uu wax uu doono qoro iyaga oo aan ka yaabaynin in ay ummada Somalida Ogadeeniya kula yaabto marin habaabinta.
Warbixinta Qaaxo Warbixinta Jwxo-shiil
Dagaalo ka dhacay Ogadeeniya Qorahey June 29 – July 11, 2009
Tirada Tariikh Goobta Gabalka Dhimasho Dhawac Wadar
1 29.06.2009 Muddulka, Dh/madow Jarar 57 0 57
2 30.07.2009 Hiloduduud Shabeele 200 0 200
3 01.07.2009 Isku-Dhoonley Qoraxeey 57 0 57
4 01.07.2009 Toon-Ceeleey Qoraxeey 35 0 35
5 02.07.2009 Laan-dheer Qoraxeey 25 0 25
6 02.07.2009 Gabgabo Qoraxeey 79 0 79
7 02.07.2009 Sabati Jarar 2 3 5
8 02.07.2009 Xaraarey Nogob 136 0 136
9 03.07.2009 Dh/buur – Dh/madow Jarar 80 0 80
10 03.07.2009 Hodon-weyne Lama yaqaan 28 0 28
11 06.07.2009 Qaaxo Jijiga 1 0 1
12 08.07.2009 Marsin Qoraxeey 1 2 3
13 10.07.2009 Birqod Jarar/Qoraxeey 4 6 10
14 11.07.2009 Dhaba-Jiriso Nogob 3 2 5
15 11.07.2009 Adeegga Jarar 40 0 40
Dhimasho Guud 761
Waxaa warbixinta ku jirta in ciidamada Itobiya in ay dhac u gaysteen dadweyne badan, waa run in ay dhibaatooyin badan u gaystaan dadweynaha. Waxaa dhab in hadii ay sidan bil walba wax u dhacaan in ayna dadba hadheen,
dadka magacyadoodu xitaa sax ma ah, hadii aad u fiirsataana waxaad ogaanaysaan in ayna sax ahayn, laakiin qol mugdi ah lagu sameeyey.
Been sheeg oo been run u egg sheeg, laakiin wax aan jirin ha sheegin, ma aha dacaayad in aad sheegto wax aan jirin, waxaananse garanaynin dadka waxan qorayaa miyeyna ogayn in dad badan oo dalka u dhashay oo iyaga ka xog ogaalsan kana wadanisan in ay jiraan.
Tirada Tariikh Goobta Gabalka Magaca Dhaca
1 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Cabdi Xasan 700
2 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Cabdiqadir 400
3 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Rasaas Gaaciye 300
4 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Cabdullahi Yoonis 1200
5 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Jaahuur Cabdullahi 5 need adhi
6 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Ardo Dheer 2000
7 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Cabdi Xasan Dhabarlow 900
8 28.06.2009 Farmadow Qoraxey Sh Axmed Sulub 5400
9 28.07.2009 Farmadow Qoraxey Axmed Yusuf Sugule 400
Hantida Guud 11300
Dhac kale oo ka dhacay gabalka Nogob, iyada laftigeedu waa wax runta aad uga fog, bal dhawra in aad wax ka fahamtaan. Waxaan odhankaa waa habaar, waxaana fiican in waxa saxda ah ee dhaca loo gudbiyo Ogaden Human Rights si ay u rikoodhayso, laakiin wixii aan jirin ma aha in dadweynaha lagu jaha wareeriyo, iyada oo looga dan lee yahay in Jwxo-shiil Qaaraan loogu qaado.
Tirada Tariikh Goobta Gabalka Magaca
05.07.2009 Wardo-dhabar Nogob Maxalim Maxamud Diiriy
1 3.07.2009 Hodanweyn Nogob Reer Shariif Cabdi Shariif Yusuf
2 3.07.2009 Hodanweyn Nogob Xasan Adan
3 3.07.2009 Hodanweyn Nogob Reer Khyaar
4 3.07.2009 Hodanweyn Nogob Taajir Aadan
5 3.07.2009 Hodanweyn Nogob Reer Cumar Nuur
Tirada Tariikh Goobta Gabalka Magaca Lacagta
1 06.07.2009 Gabagabo Qoraxey Khadiija Ibrahim Garab 2000
2 06.07.2009 Gabagabo Qoraxey Saxan Sheikh Cabdullaahii 1600
3 06.07.2009 Rabaso Jarar 6 Baabuur Adhigii saaraa oo dhan 6 Baabuur
Iyo 6 Babuur
wadar Guud 3600
Waxaa warbixinta ku jir dad la xidhay, had iyo goor waxaa la xidhaa dad badan, waxaana si sharci daro u xidha Ina Illey, ma jiraan dad kale oo soo fara galiya waana uun xumaan dadkeena ah. Waxaa kale oo iyaguna dagaal xun kula jira dadweynaha kooxda Jwxo-shiilada. Waxay dhigaan miino tuulooyinka dhexdooda iyaga oo ula dan leh dad gaar ah. Madaxaa ka dhacay Gabagabo, magaalada qarkeeda ayaa la dhigay miino askarta Itobiya ayaa ku dhimatay, maxaa dhici deedna, waa khasab in dad tuulada la xidhxidho.
1 07.07.2009 Gabagabo Qoraxey Deeq colaad Khaliif
2 07.07.2009 Gabagabo Qoraxey Maxamed Maxamud Dahir (Fagadhi)
3 07.07.2009 Gabagabo Qoraxey Xuseen Axmed Cali Abshir
4 07.07.2009 Gabagabo Qoraxey Axmed Carab Xuseen
Warbixinta waxaa ku jira gabadh la Kufsaday, waa dhab in ay dhacayaan arimahan oo kale xitaa dadkeena dhexdiisa ayey ka dhici kartaa. Laakiin waxaan hubaa in ayna ku badnayn faraxumayntani dhulkeena mar mar mooyee. Waxaase xaqiiq ah meel dagaal ka socdo, waxaa ka dhici kara wax walba, waana in la qoro oo sida ugu asluubta badan loo rikoodhiyo, iyada oo wax bixin hanaansan ahna loo gudbiya hayyadaha ku shaqada leh.
Laakiin waa xaaraan in wax aan waxba ka jirin loo soo bandhigo dadweynaha.
1 09.07.2009 Dusmo Jarar Sabxa Axmed Yaasin gabad
Jabhadaha ka dagaalamay dhulka Somalida Ogadeeniya waxaa ay wadaan dagaalo ay doonayaan in ay kaga xoreeyaan xabashida dhulkeena.
waxaa jira garab ka soo horjeeda dadweynaha oo iyagu dagaalka u gala in ay waxyeeleeyaan dadweynaha, waayo waxay dhibaato ka dhex sameeyaan dadweynaha dhexdiisa, dabadeedna ciidamada Itobiya waxay ku gadoodaanka dadweynaha.
74 Ruux oo lagu dilay Cobale ayaa ayey wali Itobiya ka sheekaysaa, maxaad u malaynaysaa hadii bil walba 800 laga dilayo Itobiya waxaan hubaa in ayna labo bilood Itobiya fadhideen dhulkeena.
Hadaba, arimahan kooxda Jwxo-shiil ku qoraan bogagga ee ay maalin walba ku sheegaan in uu dagaal dhacay, wadan dagaal maalin walba ka dhaco, waxaa xaqiiq ah in wajiga uu maanta yahay uusa ahaadeen. 2007/08 dagaalo iyo xasuuq ayaa dalkeena ka dhacay waana laga wada og yahay aduunka waxaana Itobiya lagu haystaa falalkii ay gaysatay 2007/08.
Laakiin wax ay qorayaan webabka qabyaalada ee ay ka mid yihiin Hanqadh, Dufaan, Ogaden.com, Ogadennetnews, ONLF iyo bogga Ergada indhaha la,a ee Qorahey oo iyagu aan ujeedo halgan wadin balse doonaya in ay Qaaraanka u diyaariyaan Jwxo-shiil.